Nagarik Shukrabar - जब दीपक विष्टले मेसीलाई भेटे...
शुक्रबार, ०६ असार २०७६, ०४ : ००
जब दीपक विष्टले मेसीलाई भेटे...
बिहिबार, ३१ जेठ २०७५, ०८ : १३ | अनिल यादव
नेपाली खेलकुद इतिहासकै सबभन्दा सफल खेलाडी हुन्, दीपक विष्ट । दक्षिण एसियाली खेलकुदमा लगातार चार स्वर्ण पदक जितेका कीर्तिमानी तेक्वान्दो स्टार दीपक छनोट चरण पार गरेर ओलम्पिक खेल्ने दुई मध्येका एक नेपाली खेलाडी हुन् । २०११ को ११ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि चोटले निरन्तर सताएका कारण दीपकले खेलाडी जीवनलाई निरन्तरता दिन सकेनन् तर खेलबाटै टाढिन भने सम्भव भएन । त्यसैले उनी अहिले प्रशिक्षकका रुपमा राष्ट्रिय तेक्वान्दो टिमका खेलाडीहरुलाई तिखारिरहेका छन् । अरु थुप्रै दीपक विष्ट उत्पादनको प्रयासमा दिनरात जुटिरहेका छन् ।
स्कुले जीवनमा भलिबलका राम्रा खेलाडी दीपक तेक्वान्दोमा मजैसँग जमे । तर फुटबल अर्को यस्तो खेल हो, जुन उनका लागि भलिबल र तेक्वान्दोजत्तिकै प्यारो छ । फुटबलमा पनि नेपालपछि अर्जेन्टिना उनको प्रिय टिम हो भने लियोनल मेसी मनपर्ने खेलाडी ।
मैदानमा मेसीले गर्ने जादुले दीपकलाई पनि विश्वभरका अरु करोडौंजस्तै उनको फ्यान बनाएको थियो । संयोग कस्तो मिल्यो भने २००४ मा संगीना वैद्यपछि २००८ को ओलम्पिकका लागि दीपकले छनोट चरण पार गरे । चीनको बेइजिङमा भएको त्यो ओलम्पिक दीपकका लागि विशेष रह्यो । उनको आफ्नै प्रदर्शनका कारण होइन । पहिलो चरणकै खेलमा पराजित भए पनि दीपकले बेइजिङबाट जीवनभरका लागि मीठो स्मरण बोकेर फर्किए । त्यही ओलम्पिकमा उनलाई मन पर्ने खेलाडी मेसीले अर्जेन्टिनी फुटबल टिमको नेतृत्व गरेका थिए । जहाँ मेसीको अर्जेन्टिनाले स्वर्ण पदक पनि जित्यो । आफूलाई मन पर्ने स्टारको टिमले जित्दाको खुसी सामान्य भए पनि दीपकले मेसीसँग भिलेज सेयर गर्न पाएका थिए । थुप्रै फोटो खिचाएका थिए । विश्वकै सबभन्दा ठूलो स्टारसँग मित्रताको मौका पाएका थिए ।
दीपककै शब्दमा त्यो उनका लागि मीठो स्मरण थियोः
खाना खाइरहेको बेला अचानक मैले मेरो नजिकैको टेबलमा अर्जेन्टिनाको जर्सी लगाएका खेलाडीहरु देखेँ । अझ घुरेर हेरेँ। हेर्दै जाँदा मलाई मनपर्ने अनुहार मेसी टेबलको कुनामा बसेर खाना खाइरहेको जस्तो लाग्यो ।
हैट, होइन होला ! संसारमा आफूलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने मान्छे आफ्नो अगाडि प्रकट भएको देख्दा को चकित हुँदैन होला ? म नहुने कुरै थिएन । उनलाई देख्नासाथ मसँगै बस्नुभएका मेरा कोरियन प्रशिक्षकलाई सोधेँ, ‘यिनी मेसी होइनन् ?’
सुरुमा नचिनेको प्रतिक्रिया दिए । पछि मैले अर्जेन्टिनाको पपुलर फुटबल खेलाडी क्या भनेर सम्झाएपछि मात्र चिनेजस्तो गरे, ‘अँ, हो जस्तो लाग्यो ।’
म खासगरी नेपालको तर्फबाट ओलम्पिक खेल्न चीन पुगेको तेक्वान्दो खेलाडी । मनभित्रैबाट देशका लागि केही गर्ने चाहना थियो किनभने देशले मबाट गोल्ड मेडलको आशा राखेको थियो । गोल्ड मेडलको चाहना बोकेको मान्छे मेसीलाई देखेपछि एकछिन त्यहीँ अलमलिए । तत्काल मेरो एउटा चाहना थपियो– तर त्यो गोल्ड मेडलजत्रो त थिएन । तैपनि मेरा लागि कम महŒवको भइदिएन । संसारका कयौँ पपुलर खेलाडीहरु देख्दा पनि मलाई तस्बिर खिचाउने रहर जागेको थिएन तर मेसीलाई देख्नासाथ मेरो मन तस्बिर नखिचाइरहन मानेन ।
मेरो कोचले खाना खाइञ्जेल डिस्टर्ब नगर्न सुझाए । खाना खाएपछि सबैले प्लेट आ–आफैँ डस्टबिनमा पु¥याउने चलन थियो । मेसी उठेर डस्टबिनतिर लागेपछि म पनि उनलाई भेट्न उनीतर्फ लम्किएँ । सँगसँगै प्लेट त्यहाँ राख्यौँ । त्यसपछि मैले हल्का मुस्कुराउँदै मेसीलाई बोलाएँ, ‘एक्सक्युज मी ।’
जवाफ आयो, ‘यस प्लिज !’ उनले यति नरम भएर जवाफ दिए कि मलाई एकछिन त ऊ मेरो आफ्नै साथीजस्तो महसुस भयो, संसारकै महान् खेलाडी अर्थात् फुटबलको सुपरस्टारजस्तो मलाई लाग्दै लागेन । ‘क्यान आई टेक अ फोटो विद् यु ?’ मैले तस्बिरका लागि अनुरोध गर्दा उनले सजिलै स्वीकारे । दौडिएर गएर गुरुलाई मोबाइल थमाएर र तस्बिर खिचिदिन अनुरोध गरेँ र केही तस्बिर खिचाएँ ।
उसको र मेरो जर्सीको रङ त फरक थियो तर संयोगले एउटा कुरा भने मिलेछ– हामीले दुवैले लगाएको जर्सी एउटै कम्पनी एडिडासको परेछ । कुरा सानै थियो तर मन ठूलै भएर रमायो ।
मेसीलाई देख्नासाथ मलाई केही गिफ्ट दिन मन लाग्यो । नेपालको झण्डा रहेको ब्याच मसँग थियो । मैले मेसीलाई त्यो उपहारस्वरुप दिएँ । उनले खुसीसाथ थापे र मलाई धन्यवाद दिए । ‘सरी, आइ डन्ट ह्याभ,’ आफूसँग त्यस्तो कुनै उपहार नरहेको भन्दै माफी पनि मागे । ‘इट्स ओके’ भनेर उनलाई सहज बनाइदिएँ ।
तर मेसीको त्यस्तो रेस्पोन्सले म ऊप्रति झन् बढी प्रभावित नभइरहन सकिनँ । उनी त्यत्तिकै महान् बनेका होइन रहेछन्, मेरो मनमा यस्तैयस्तै कुरा खेल्यो । अंग्रेजी त्यति बोल्दैन रहेछन् । त्यसैले हामीबीच त्योभन्दा बढी संवाद भएन तर मैले फोटो खिचाएपछि ऊ मेसी रहेको कुरा त्यहाँ धेरैले थाहा पाए । विभिन्न देशका फ्यानहरु उनीसँग एकाएक गर्दै तस्बिर खिचाउन थाले । एकाएक तस्बिर खिचाउने भीड लाग्यो ।
मलाई संसारमा मनपर्ने दुई खेलाडीमध्ये मेसी एक हुन् । अर्को भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुल्कर हुन्, जसलाई एकपल्ट भए पनि भेट्न मन छ । मेसीलाई भेट्नुअघि त म उनको जादुमय खेलको फ्यान थिएँ । मैदानभित्र उनले देखाउने फुटबल कला र अनुशासनले मलाई सधैँ लोभ्याउँथ्यो । उनीप्रतिको सम्मान उनलाई नभेट्दै जति थियो, भेटेपछि त्यो बढेर दोब्बर भयो । उनी एकदमै शान्त, शालिन र सभ्य देखिन्थे । एकरत्ति पनि फुर्तिफार्ती थिएन ।
हामी बसेको घर र उनी बसेको घर आमनेसामने थियो । सबै जना सन् २००८ को बेइजिङ ओलम्पिकमा आ–आफ्नो देशबाट सहभागिता जनाउन आएका थिए । सबै खेलाडीलाई आयोजकले एउटै भिलेजमा राखेको थियो । १२ दिन जति त्यहाँ रहँदा सधँै मेसीलाई खाना खाने बेलामा देखिन्थ्यो । खाँदाखेरी हिँड्दाखेरीको व्यवहार नियालेर हेर्थें । ह्याङ्कीप्याङ्की व्यवहार थिएन । मान्छे फुच्चे । सबैले उनको टाउकोमा हात राखेर मुसार्दा रहेछन् । उनी केही प्रतिक्रिया दिँदैनथे, बस् मुस्कुराइरहन्थे, हाँसिरहन्थे । कहिल्यै रिसाएजस्तो महसुस भएन । एकदमै ‘कुल’ देखिन्थे । केटी फ्यानहरु छेउमा आएर तस्बिर खिचाउँथे अनि जिस्काउँथे । तैपनि उनको प्रतिक्रिया केही हुँदैनथ्यो । बस्, उनीहरुलाई हेरेर मुसुक्क हाँसिदिन्थे ।
महान् खेलाडीमा हुनुपर्ने गुण उनमा देखिन्थ्यो । जति ठूलो भए पनि उनले कहिल्यै आफू ठूलो खेलाडीजस्तो व्यवहार गरेको देखिनँ । उनलाई भेट्दा र देख्दा ‘फलेको वृक्ष निहुरिए’जस्तै लाग्थ्यो । उनको त्यस्तो लोभलाग्दो व्यवहार देखेपछि ऊप्रति मेरो सम्मान बढेको थियो र अझै कायम छ ।
त्यो ओलम्पिकमा देशका लागि गोल्ड मेडल जिताउन नसक्दा म दुःखी थिएँ तर मेसीकै अर्जेन्टिनाले गोल्ड मेडल जितेकोमा भने खुसी भएँ ।
त्यही ओलम्पिकमा मैले अरु पनि थुप्रै पपुलर खेलाडीलाई देखेँ र भेटेँ पनि । ब्राजिलका पपुलर फुटबल खेलाडी रोनाल्डिनोलाई पनि भेटेँ । ऊ अलि स्टाइलिस्ट नै थियो, ह्याङ्कीप्याङ्की नै देखिन्थ्यो । वरिपरि चार पाँच जना आउरेबाउरे लिएर हिँड्थ्यो । आफ्नै टाइपको थियो । ऊसँग पनि मैले फोटो खिचाएँ । फोटो खिचाउनासाथ मलाई हेरेर हाँस्यो अनि आफ्नो बाटो लागिहाल्यो । धेरै गफ हुन पाएन ।
मेसीसँग फोटो खिचाएपछि मैले खुसी हुँदै त्यो फोटो फेसबुकमा राखेको थिएँ । फेसबुकमा राखिएको सो तस्बिरले त्यस्तो ठूलो चर्चा पाउला भन्ने सोचेको थिइनँ । म त ओलम्पिक खेल्न गएको थिएँ, खेलको दबाबमा थिएँ । पछि नेपाल फर्किएपछि पो थाहा भयो– मेसीसँगको फोटोले यहाँ त बबालै गरेछ ! जताततै चर्चा भएछ । पत्रपत्रिकामा छापिएछ । फोटो त भयंकर भाइरल भएछ ।
सम्मानित व्यक्तिसँग भेटेर मेरो पनि सम्मान झन् बढेछ ! म मात्रै होइन, मेरा थुपै्र साथी मेसीका फ्यान थिए । सबैले सोध्थे, ‘मेसी कस्तो थियो ? के भन्यो ?’ आदिइत्यादि । अनि म उनीहरुलाई कथा सुनाउँथेँ । रमाइलै भयो । झन् फेसबुकमा त म्यासेजको आइरो नै लागेको थियो । कोही ‘यु आर भेरी लक्की’ भन्दै म्यासेज पठाउँथे, कोही ‘यु आर अल्सो आवर सुपरस्टार लाइक मेसी’ भन्दै फुर्काउँथे ।
मलाई लाग्छ, मेसीलाई भेट्न पाउनु मेरो सौभाग्य हो । यो भगवान्ले जुराइदिएको संयोग हो । जो कोहीले यस्ता महान् खेलाडीलाई भेट्न पाउँदैनन् । मैले मेरो जिन्दगीमा थुप्रै तस्बिर खिचेको छु तर मेसीसँग खिचेको तस्बिर र ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा बोकेर खिचेको तस्बिर जति प्रेमिल र महŒवपूर्ण मलाई अरु लाग्दैन ।
मेसीसँगको फोटो मैले घरमा मात्रै होइन, पसलमा समेत ठूलो बनाएर राखेको छु । नयाँ बानेश्वर (काठमाडौं)मा मेरो ‘स्पोटर््स् युनिभर्स’ नामको खेलसामग्री पसल छ । पसलबाहिर र भित्र दुवैतिर मेसीसँगको तस्बिर राखेको छु । पसलमा आउने ग्राहकले अचम्म मान्दै सोध्ने गर्छन्, ‘मेसीलाई साँच्चिकै भेटेको हो कि एनिमेसन गरेर बना’को ?’ साँच्चिकै भेटेको भनेपछि कस्तो लाग्यो भनेर जिज्ञासासमेत राख्छन् । जे होस्, मेसीसँग खिचाएको तस्बिरले मेरो व्यापार बढाउन पनि सघाउ पु¥याइरहेको छ ।
सदाझैँ यसपल्ट पनि विश्वकपमा मेरो सपोर्ट अर्जेन्टिनालाई छ । मेसीले बार्सिलोनालाई त धेरैपल्ट जितायो एकपल्ट अर्जेन्टिनालाई जिताएको हेर्ने मन छ । देशलाई विश्वकप जिताउन नसक्दा पक्कै पनि उनको मन खिन्न भएको होला । आफ्नो देशलाई जिताउन नसक्दा कुन खेलाडीको मन नरोला र ! त्यसैले पनि यसपल्ट मैदानमा मेसीको चमत्कारले अर्जेन्टिनाले जितिदिए हुन्थ्यो मेरो प्रार्थना छ ।
(अनिल यादवसँगको कुराकानीमा आधारित)
भारतीय क्लबमा अनिता र सावित्रा
भारतको तमिलनाडुमा रहेको फुटबल क्लब सेथुलले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमकी मिडफिल्डर अनिता बस्नेतलाई अनुबन्ध गरेको छ । उसले ‘हिरो भारतीय महिला लिग’ का लागि बस्नेतलाई अनुबन्ध गरेको हो । उसले यसअघि नै सावित्रा भण्डारीलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ ।
आत्मकथाले डुबायो अफ्रिदीलाई
आत्मकथा सबैलाई फाप्दैन । कहिलेकाहीँ आफ्नो आत्मकथाले आफैँलाई संकटमा पारिदिन्छ । यस्तै भएको छ, पाकिस्तानका लिजेन्ड क्रिकेटर साहिद अफ्रिदीका लागि । उनले आफ्नो खेल जीवनमा आफ्नो जन्ममिति सन् १९८० लेखाउँदै आएका थिए । आत्मकथा ‘गेम चेन्जर’ मा भने उनले आफ्नो उमेर पाँच वर्ष बढी सन् १९७५ लेखे
हुने भयो निर्वाचन
विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषदबाट निलम्बनमा रहेको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आइसिसी)ले गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटीले क्यानको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।